Culimada Soomaaliyeed oo cadaadis ku bilaaway Farmaajo . - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaCulimada Soomaaliyeed oo cadaadis ku bilaaway Farmaajo .
Culimada Soomaaliyeed oo cadaadis ku bilaaway Farmaajo .
Culimada Soomaaliyeed oo bilaabay ineey cadaadis ku saaran MW Farmaajo inuu uturo dalka iska markaasna uu xilka si nabdoon ku wareejiyo.
Farmaajo ayaa bulshada isla aragtay inuu yahay Kaligii Talis majixin jixa ah, taaso cabsi wayn soo foodsaartay shacabka in markale lo noqdo dagaal sokeeye.
Culimada ayaa fariimo umarsiiyay dhan ka warbaahinta iyo mid qoraal toos ah oo ay u direen ayeey ku sheegen in loobahan yahay in dalka uu uturo cashirna Uuka qaato wadii ayku danbeeyen kaligii Taliye . Sidaasi darteed aysan danta umada Soomaaliyeed ineeysan ku jirin in xukun ka Laboobo.